I-Trollduino: ibhodi yentuthuko ekhethekile ye-Arduino | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Trollduino: ibhodi ekhethekile kakhulu ye-Arduino
Kunamapuleti amaningi asemthethweni futhi ahambisanayo I-Arduino. Amathuba angapheli wonjiniyela abafuna isisekelo sokuqala amaphrojekthi abo e-DIY. Manje abenzi banethuluzi elisha elengeziwe, futhi linegama elinqatshelwe ukwazi: UTrollduino. Kepha akuyona ukuphela kwento exakile ngaleli puleti efana ne- Arduino UNO futhi lokho kusebenzisa into efanayo yefomu.
Futhi uma uzibuza ukuthi yini eyenza leli bhodi lezentuthuko likhetheke kangaka, iqiniso ukuthi kufanele ubheke i-chip yalo eyinhloko. Ngenkathi ise-Arduino nakwamanye amabhodi entuthuko iyi-microcontroller noma i-MCU, esimweni sikaTrollduino impela owaziwa ngogesi: yebo, elula Isikhathi esingu-555.
Kepha ... linda, linda! Ingabe ikhona ngempela into enjalo? Ake sihambe ngezingxenye. Njengoba wazi, i-IC 555 iyi-timer eyaziwayo enamathuba amaningi emhlabeni we-DIY. Izinto ezinhle zingenziwa ngale chip nezinye izinto ezimbalwa.
Ngakho-ke, umuntu (UMild Lee Unentshisekelo kusuka ku-Hackaday.io) kusuka kwi-cyberpace kwaqhamuka naleli bhodi leTrollduino "isimanga". Indlela yokuhambisa umphakathi Njengoba igama layo likhombisa. Futhi kuyo uphakamisa ukusebenzisa i- Arduino UNO lapho i-microcontroller ithathelwe indawo yisibali sikhathi esingu-555, esilula kakhulu, kepha esingasetshenziselwa ukuxhuma izingxenye ezikhonkwaneni zazo futhi sihlele eminye imisebenzi.
Izithombe zingokoqobo, kuzo ungabona ukuthi ubeka kanjani ama-triple 5 epuletini e isitayela UNO. Ngaphezu kwalokho, amanye ama-resistors nama-capacitors afakiwe ebhodini lokuthuthuka, ngisho nesixhumi sejack kanye nesixhumi se-USB samandla (ngoba uzokwazi ukugcina idatha encane ku-555 ...). Ngokuqondene nezikhonkwane, njengoba ubona nje nazo ziyahambisana ne- Arduino UNO.
Y, noma ngabe kuyadlalwa, iqiniso ukuthi kungaba umbono omuhle kwabanye abaqalayo abafuna ukuqala ukusebenza ne-IC 555 ngendlela elula. Yebo, ngokulinganiselwa okukhulu nokunye okunjalo, kepha uma ufaka ama-resistors nama-capacitors ahlukahlukene, ungadlala ngawo.
Uma unesithakazelo, unga landa isikimu ubone eminye imininingwane lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-Trollduino: ibhodi ekhethekile kakhulu ye-Arduino
555 nxa kusho
Impela, kunqunyelwe impela uma kuqhathaniswa nawo wonke amathuba ahlinzekwa yi-555 (angisasho amabili), kepha njengombono wokuqala akukubi nakancane.
IServo: ungayisebenzisa kanjani i-servo motor ne-Arduino
I-Potentiometer: konke okufanele ukwazi